“ တီ.. တီ.. တီ.. ”
လမျးမှာ ကားဟှနျးသံတှေ ဆူညံနခြေိနျမှာ လမျးကဉျြးလေးကို ပိတျပွီးတော့ ဆိတျတအုပျက ရှကေ့ သှားနတေယျ ။ ဆိတျတှကေလညျး နညျးနညျးနောနောမှ မဟုတျတာ ။
“ ဟေ့ ကောငျလေး. မငျး ဆိတျတှကေို မွနျမွနျမောငျးစမျး.. ဒီမှာ ဝနျကွီး လာနတော မသိဘူးလား ”
ဝနျကွီးရဲ့ ရှတေ့ျောပွေးက ကားပျေါကနေ ဆိတျကြောငျးသမားကို အျောလိုကျပါတယျ။
“ ဟေ့.. မွနျမွနျပါဆိုမှကှာ ”
“ အာဗြာ.. ဆိတျတှကေ လူတှလေို မသိဘူးဗြ.. ဒါ သူတို့ သှားနကေလြမျး ဆိုတော့ သူတို့ သှားနတေဲ့ နှုနျးအတိုငျးပဲ သှားမှာ ”
“ မွနျမွနျမောငျးကှာ ”
ဝနျကွီးက ကားပျေါက ဆငျးလိုကျပွီးတော့..
“ ဟေ့.. နပေါစကှော.. နပေါစေ ” လို့ ပွောလိုကျတယျ ။ ထို့နောကျ ဝနျကွီးက ဆိတျကြောငျးသားလေး နားကို သှားပွီးတော့..
“ ဒါနဲ့ မောငျရငျ.. မောငျရငျ့ရဲ့ ဆိတျတှကေို ဘယျနှကောငျ ရှိတယျ ဆိုတာ အမှနျပွောနိုငျရငျ.. ဦးကို ဆိတျတဈကောငျ ပေးမလား ”
“ ဆိတျအားလုံးရဲ့ အရအေတှကျလား ”
“ အားလုံးပေါ့ ”
“ ဟာ.. ဒီဆိတျအားလုံးကို ဘယျလောကျ ရှိတယျ ဆိုတာ အတိအကြ ပွောနိုငျရငျ ဆိတျတကောငျ ပေးတယျဗြာ … ယူသှား ”
“ တကယျလား ”
“ တကယျ ”
ဝနျကွီးက ကားခေါငျးပျေါကို ကှနျပြူတာ တငျလိုကျတယျ ။ ပီးတော့ ကောငျးကငျက ဂွိုဟျတုနဲ့ ခြိတျတယျ ။ ဌာနရဲ့ ပငျမ စခနျးက မွပွေငျကွညျ့ စနဈဌာနကို လှမျးပွောတယျ ။ ကောငျးကငျကနေ ဝနျကွီးနရောကို ရှာပေးတယျ ။ တိတိကကြ သိတော့ ဆိတျအုပျကို ကွညျ့တယျ ။ ကှနျပြူတာကွီးတှနေဲ့ အဖွေ ထုတျတယျ ။ ပွောတာကတောငျ ကွာသေး ။ တှကျခကျြပွီး ဝနျကွီးဆီကို အကွောငျး ပွနျလိုကျတာက နှဈမိနဈပဲ ကွာတယျ ။
“ ၅၈၆ ”
“ ကဲ… ကောငျလေး… မငျးဆိတျ စုစုပေါငျးက ၅၈၆ ကောငျ ”
“ဗြာ ဟုတျလှခညျြလား.. သောကျကြိုးနညျး တျောတာပဲ ။ ကြှနျတေျာ့ဆိတျ အားလုံးရဲ့ အရအေတှကျ အတိအကပြဲ ”
“ ကဲ ဒါဆို မငျးရှုံးပွီနျော ”
“ ဟုတျကဲ့… ဝနျကွီး ကွိုကျတဲ့ ဆိတျတကောငျ ယူသှားဗြာ ”
“ ဟေ့… ဒီကောငျလေးကို ကားပျေါတငျလိုကျကှာ… ဒီဆိတျကို ညကရြငျ ခကျြစားကွတာပေါ့ ”
ဝနျကွီးရဲ့ တပညျ့တှကေလညျး ဝနျကွီး နားရှကျဆှဲထားတဲ့ အကောငျလေးကို ကားပျေါ ပှတေ့ငျကွတယျ ။ ကားပျေါတကျ တော့မယျ လုပျနခြေိနျမှာ ဝနျကွီးကို ဆိတျကြောငျးသမားက ပွောလိုကျတယျ ။
“ ဦးလေး… ဦးလေးကို ဘယျဝနျကွီးဌာန ကလို့ အတိအကြ ပွောရငျ ကြှနျတေျာ့ အကောငျလေး ပွနျပေးမှာလား ”
“ ဟာ ဟုတျလှခညျြလား.. ပွောစမျးကှာ.. ငါ ဘယျဝနျကွီးဌာန ကလဲလို့ ၊ မငျး မှနျမှနျ ပွောနိုငျရငျ မငျးအကောငျလေးကို ပွနျပေးရုံတငျ မဟုတျဘူး.. ငှတေဈသိနျးလညျး ပေးဦးမယျ ”
“ ငါ လူကွီးကှ.. စကားကို အတညျပွောတယျ ”
“ ဦးလေးက ပညာရေး ဝနျကွီးပဲ ဖွဈရမယျ ”
“ အလို… မငျးပွောတာ မှနျသကှာ.. ဟကေ့ောငျတှေ သူ့အကောငျလေးကို ကားပျေါက ပွနျခပြေးလိုကျ.. ဒါနဲ့ မငျး ငါ့ကို ပညာရေးဝနျကွီးမှနျး မငျး ဘယျလို သိတာလဲ ”
“ ဦးလေးရယျ.. ဦးလေးက ကြှနျတေျာ့ဆိတျ ဆိုပွီး ကားပျေါကို တငျခိုငျးနတော ဆိတျမှ မဟုတျတာ ခှေးဗြ။ အဲဒါ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ခှေးပါ ။ ဒီနိုငျငံမှာ ဆိတျမှနျးမသိ ခှေးမှနျး မသိအောငျ လုပျနိုငျတာ ပညာရေးဝနျကွီးကလှဲပွီး ဘယျသူမှ မဖွဈနိုငျပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောက ဦးလေးကို ပညာရေးဝနျကွီးလို့ တနျးပွောနိုငျတာ.. ဟုတျပါတယျနျော ”
ဝနျကွီးလညျး အောငျ့သကျသကျနဲ့ ငှတေဈသိနျးပါ ထပျထုတျခဲ့ရ သဗြ ။
( အိန်ဒိယ ဇာတျလမျးလေးတဈခုကို မှီငွမျးပါတယျဗြာ )
လမ်းမှာ ကားဟွန်းသံတွေ ဆူညံနေချိန်မှာ လမ်းကျဉ်းလေးကို ပိတ်ပြီးတော့ ဆိတ်တအုပ်က ရှေ့က သွားနေတယ် ။ ဆိတ်တွေကလည်း နည်းနည်းနောနောမှ မဟုတ်တာ ။
“ ဟေ့ ကောင်လေး. မင်း ဆိတ်တွေကို မြန်မြန်မောင်းစမ်း.. ဒီမှာ ဝန်ကြီး လာနေတာ မသိဘူးလား ”
ဝန်ကြီးရဲ့ ရှေ့တော်ပြေးက ကားပေါ်ကနေ ဆိတ်ကျောင်းသမားကို အော်လိုက်ပါတယ်။
“ ဟေ့.. မြန်မြန်ပါဆိုမှကွာ ”
“ အာဗျာ.. ဆိတ်တွေက လူတွေလို မသိဘူးဗျ.. ဒါ သူတို့ သွားနေကျလမ်း ဆိုတော့ သူတို့ သွားနေတဲ့ နှုန်းအတိုင်းပဲ သွားမှာ ”
“ မြန်မြန်မောင်းကွာ ”
ဝန်ကြီးက ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီးတော့..
“ ဟေ့.. နေပါစေကွာ.. နေပါစေ ” လို့ ပြောလိုက်တယ် ။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးက ဆိတ်ကျောင်းသားလေး နားကို သွားပြီးတော့..
“ ဒါနဲ့ မောင်ရင်.. မောင်ရင့်ရဲ့ ဆိတ်တွေကို ဘယ်နှကောင် ရှိတယ် ဆိုတာ အမှန်ပြောနိုင်ရင်.. ဦးကို ဆိတ်တစ်ကောင် ပေးမလား ”
“ ဆိတ်အားလုံးရဲ့ အရေအတွက်လား ”
“ အားလုံးပေါ့ ”
“ ဟာ.. ဒီဆိတ်အားလုံးကို ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ အတိအကျ ပြောနိုင်ရင် ဆိတ်တကောင် ပေးတယ်ဗျာ … ယူသွား ”
ဝန်ကြီးက ကားခေါင်းပေါ်ကို ကွန်ပျူတာ တင်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ ကောင်းကင်က ဂြိုဟ်တုနဲ့ ချိတ်တယ် ။ ဌာနရဲ့ ပင်မ စခန်းက မြေပြင်ကြည့် စနစ်ဌာနကို လှမ်းပြောတယ် ။ ကောင်းကင်ကနေ ဝန်ကြီးနေရာကို ရှာပေးတယ် ။ တိတိကျကျ သိတော့ ဆိတ်အုပ်ကို ကြည့်တယ် ။ ကွန်ပျူတာကြီးတွေနဲ့ အဖြေ ထုတ်တယ် ။ ပြောတာကတောင် ကြာသေး ။ တွက်ချက်ပြီး ဝန်ကြီးဆီကို အကြောင်း ပြန်လိုက်တာက နှစ်မိနစ်ပဲ ကြာတယ် ။
“ ကဲ… ကောင်လေး… မင်းဆိတ် စုစုပေါင်းက ၅၈၆ ကောင် ”
“ဗျာ ဟုတ်လှချည်လား.. သောက်ကျိုးနည်း တော်တာပဲ ။ ကျွန်တော့်ဆိတ် အားလုံးရဲ့ အရေအတွက် အတိအကျပဲ ”
“ ကဲ ဒါဆို မင်းရှုံးပြီနော် ”
“ ဟုတ်ကဲ့… ဝန်ကြီး ကြိုက်တဲ့ ဆိတ်တကောင် ယူသွားဗျာ ”
“ ဟေ့… ဒီကောင်လေးကို ကားပေါ်တင်လိုက်ကွာ… ဒီဆိတ်ကို ညကျရင် ချက်စားကြတာပေါ့ ”
ဝန်ကြီးရဲ့ တပည့်တွေကလည်း ဝန်ကြီး နားရွက်ဆွဲထားတဲ့ အကောင်လေးကို ကားပေါ် ပွေ့တင်ကြတယ် ။ ကားပေါ်တက် တော့မယ် လုပ်နေချိန်မှာ ဝန်ကြီးကို ဆိတ်ကျောင်းသမားက ပြောလိုက်တယ် ။
“ ဦးလေး… ဦးလေးကို ဘယ်ဝန်ကြီးဌာန ကလို့ အတိအကျ ပြောရင် ကျွန်တော့် အကောင်လေး ပြန်ပေးမှာလား ”
“ ဟာ ဟုတ်လှချည်လား.. ပြောစမ်းကွာ.. ငါ ဘယ်ဝန်ကြီးဌာန ကလဲလို့ ၊ မင်း မှန်မှန် ပြောနိုင်ရင် မင်းအကောင်လေးကို ပြန်ပေးရုံတင် မဟုတ်ဘူး.. ငွေတစ်သိန်းလည်း ပေးဦးမယ် ”
“ ငါ လူကြီးကွ.. စကားကို အတည်ပြောတယ် ”
“ ဦးလေးက ပညာရေး ဝန်ကြီးပဲ ဖြစ်ရမယ် ”
“ အလို… မင်းပြောတာ မှန်သကွာ.. ဟေ့ကောင်တွေ သူ့အကောင်လေးကို ကားပေါ်က ပြန်ချပေးလိုက်.. ဒါနဲ့ မင်း ငါ့ကို ပညာရေးဝန်ကြီးမှန်း မင်း ဘယ်လို သိတာလဲ ”
“ ဦးလေးရယ်.. ဦးလေးက ကျွန်တော့်ဆိတ် ဆိုပြီး ကားပေါ်ကို တင်ခိုင်းနေတာ ဆိတ်မှ မဟုတ်တာ ခွေးဗျ။ အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ခွေးပါ ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဆိတ်မှန်းမသိ ခွေးမှန်း မသိအောင် လုပ်နိုင်တာ ပညာရေးဝန်ကြီးကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဦးလေးကို ပညာရေးဝန်ကြီးလို့ တန်းပြောနိုင်တာ.. ဟုတ်ပါတယ်နော် ”
ဝန်ကြီးလည်း အောင့်သက်သက်နဲ့ ငွေတစ်သိန်းပါ ထပ်ထုတ်ခဲ့ရ သဗျ ။
( အိန္ဒိယ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို မှီငြမ်းပါတယ်ဗျာ )